Instagram မှအကောင်းဆုံးရယူရန် application Gadget သတင်း
Villamandos | | Software များ
ခရီးသွားခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းနှင့်အရည်အသွေးမြင့်ရုပ်ပုံများရိုက်ကူးခြင်းသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကစဉ်း စား၍ မရနိုင်သောအရာဖြစ်သော်လည်းယနေ့တွင်၎င်းသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်လာသည်။ အရည်အသွေးမြင့်ကင်မရာများနှင့်အတူစျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သည့်ဆိပ်ကမ်းအမြောက်အမြားရှိသည် ကျွန်ုပ်တို့တွင်အနည်းငယ်သောသို့မဟုတ်လုံးဝမရှိသောပုံရိပ်များကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောကင်မရာများနှင့်သို့မဟုတ် reflex ကင်မရာများကိုမနာလို ၀ န်တိုရန်ဖြစ်သည်။
မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များ၏ကင်မရာများ၏တိုးတက်မှုနှင့်အတူ, အ ဓာတ်ပုံနှင့်ဆက်စပ်သောကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းများအတွက် applications များ။ လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်တစ်ခုကမမျှော်လင့်ဘဲကန့်သတ်အထိတိုးပွားလာခဲ့သည် Instagram ကိုကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုရေးကွန်ယက်၏စိတ်ဝိညာဉ်နှင့်အတူထိုအပလီကေးရှင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏သူငယ်ချင်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ filter များနှင့်အခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောရွေးချယ်စရာများမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သူငယ်ချင်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံးပုံများကိုမျှဝေရန်ခွင့်ပြုသည်။
ဤအပလီကေးရှင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားမတူညီသောရွေးချယ်စရာများနှင့်ညှိနှိုင်းမှုအမျိုးမျိုးပေးထားသော်လည်း၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ Instagram အကောင့်နှစ်ခုကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်ထိန်းချုပ်ရန် (သို့) format ကိုဖြတ်တောက်ရန်မလိုပါသို့ပြောင်းလဲရန်တစ်ခုခုအမြဲတမ်းလိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့် ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ဓာတ်ပုံနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အရာများထဲမှတစ်ခုအနေဖြင့်အကောင်းဆုံးရယူရန်အတွက်လျှောက်လွှာ ၇ ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းချင်ပါသည် စျေးကွက်တွင်လူကြိုက်အများဆုံး.
စတင်ခြင်းမပြုမီ Instagram ကိုမိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းအမျိုးမျိုးအတွက်ရရှိနိုင်ကြောင်းသိထားသင့်သည်။ ၎င်းတို့တွင် Android နှင့် iOS နှင့်၎င်း၏ desktop version တွင်ပါ ၀ င်သည်။ လွန်ခဲ့သည့်ရက်အနည်းငယ်ကစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောတိုးတက်မှုများနှင့်အသစ်တဖန်တင်ဆက်ခဲ့ပြီး၊ လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်ရရှိနိုင်သောအဆင့်နှင့်တူညီသည်။
သင် Instagram ကိုပုံမှန်အသုံးပြုသူဖြစ်လျှင်၎င်း application များကိုမှတ်သားပါ။
4 Instagram ကိုများအတွက် Repost
cam VSCO ၎င်းသည် Instagram အတွက်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သော်လည်းဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အတွက်လူကြိုက်အများဆုံးဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ခြင်း application တစ်ခုဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။ ၎င်းကိုကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများကိုအမျိုးမျိုးသောစစ်ထုတ်ခြင်းများနှင့်အခြားမည်သည့်အသုံးချပရိုဂရမ်မှရှာမတွေ့နိုင်သည့်ပြန်လည်ထိတွေ့မှုရွေးချယ်စရာများဖြင့်တည်းဖြတ်နိုင်သည်။
လူအများအပြားကဒီပရိုဂရမ်ကိုသုံးပြီး Instagram ကို upload မလုပ်ခင်သူတို့ရဲ့ပုံတွေကို retouch လုပ်ဖို့သုံးကြတယ် သူတို့ကိုအစာရှောင်ခြင်းနှင့်အားလုံးရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်းအထက်ကွဲပြားခြားနားထိတွေ့ပေးဖို့။
Instagram ကခွင့်မပြုသည့်ရွေးချယ်စရာအနည်းငယ်အနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည် တစ်ချိန်တည်းတွင်အကောင့်နှစ်ခုကိုစီမံခန့်ခွဲပါ၎င်းသည်သုံးစွဲသူများစွာအတွက်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အရာဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်၎င်းတို့၏တရားဝင်အကောင့်နှင့်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အကောင့်ကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းအသုံးမပြုနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤပြapplicationနာကိုတရား ၀ င်လျှောက်လွှာဟုခေါ်သောကြောင့်ဖြေရှင်းနိုင်သည် အင်စတာဂရမ် နှင့်အကောင့်နှစ်ခုကိုအရိုးရှင်းဆုံးနည်းဖြင့်စီမံနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း၎င်းသည်တရားဝင်လျှောက်လွှာမဟုတ်သောကြောင့်မည်သည့် application store ကိုမှသင်တွေ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော် Android အတွက်၊ သင်လုံခြုံစွာ download လုပ်နိုင်သည်ကိုအောက်ပါမှပြုလုပ်နိုင်သည် link ကို.
ငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုသိသည့်အတိုင်း Instagram သည်မည်သည့်အသုံးပြုသူကိုမဆိုအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိဗီဒီယိုများတင်ခွင့်ပြုသည်။ ကြာရှည်ခံမည့်အရာတစ်ခုခုကိုသင်ပြလိုလျှင်အချိန်အတန်းသို့မဟုတ်ကြာရှည်သောဗီဒီယိုကဲ့သို့တူညီသောအရာများကိုအမြဲတမ်းပြုလုပ်နိုင်သည်၊ သင်လိုသလောက်များပြားစွာအရှိန်မြှင့်ပြီးသင်ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ခြင်းပရိုဂရမ်တွင်ပြနိုင်သည်။
ဒီအဘို့ငါတို့သုံးနိုင်သည် Hyperlapse ၏နာမ၌ဗတ္တိဇံတရား Instagram ကိုကိုယ်တိုင်၏တရားဝင်လျှောက်လွှာ, နှင့်ယခုအချိန်တွင်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာမှာ iOS ထုတ်ကုန်များအတွက် App Store မှတဆင့်သာရနိုင်သည်။
Instagram ကိုများအတွက် Repost
သင်၏မိတ်ဆွေတစ် ဦး ကသင်၏ဓာတ်ပုံကိုတင်လိုက်သည်သို့မဟုတ် Instagram တွင်ပျော်မွေ့သူများစွာ၏ကျော်ကြားသူတစ် ဦး ကသင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်ဓာတ်ပုံနှင့်သင့်အဆက်အသွယ်များနှင့်မျှဝေလိုလျှင်ပုံနှိပ်ရန်မလိုတော့ပါ၊ ပုံကိုဖြတ်ပါ။ နှင့်ထုတ်ဝေရန်ပြန်သွားပါ။ လျှောက်လွှာအားဖြင့်ဒီငြီးငွေ့ဖွယ်ဖြစ်စဉ်ကိုအများကြီးတိုတောင်းစေနိုင်သည် Instagram အတွက် Respostဘာပြောလို့ရမလဲ တစ်စုံတစ်ယောက်ကသူပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ပုံတစ်ပုံကိုပြန်လည်တင်ပို့ခြင်းနဲ့အနီးဆုံးအရာဖြစ်တယ်.
Android နှင့် iOS ထုတ်ကုန်များအတွက်ရရှိနိုင်သောမည်သည့် Instagram ပန်ကာနှင့်နှစ်သက်သူကိုမဆို install လုပ်သင့်သော application များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သင့်သည်။
ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာ Instagram ကသင်ပြသထားသည့်ပုံရိပ်များကိုသိမ်းဆည်းရန်သို့မဟုတ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ရွေးချယ်စရာကိုမပေးပါကျွန်ုပ်တို့နှင့်အခြားအဆက်အသွယ်များရှိသော်လည်း developer များစွာသည်အခြားအသုံးပြုသူတစ် ဦး ၏မည်သည့်ပုံနှင့်ဗီဒီယိုကိုမဆိုအလျင်အမြန်နှင့်လွယ်ကူစွာသိမ်းဆည်းရန်အပလီကေးရှင်းများစတင်ရန်တာဝန်ရှိသည်။
InstaSave ၎င်းသည်များစွာသောအသုံးချပရိုဂရမ်များအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်သင်အခမဲ့ရယူနိုင်သောကြောင့်၎င်း၊ ဂူဂဲလ်ပလေးနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းနှစ်ခုလုံးတွင်လည်းကောင်း၊ ၎င်းသည်သုံးစွဲရန်အလွန်လွယ်ကူသောကြောင့်၎င်းနှင့်အတူနေရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
သင်သိပြီးသားဖြစ်သည်၊ သင်ကိုယ်တိုင်၏ပုံသို့မဟုတ်သင်၏မိတ်ဆွေတစ် ဦး ကိုသိမ်းလိုပါက InstaSave သည်သင့်ကိုကူညီနိုင်သည်။
သင်၏ Instagram အကောင့်တွင်ဖြစ်ပျက်သမျှကိုသင်အောက်တွင်ထိန်းချုပ်ထားလိုလျှင် ဥပမာအားဖြင့်သင့်တွင်ရှိသည့်နောက်လိုက်မည်မျှရှိသည်နှင့်၎င်းတို့နှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်အချို့ကိုသိပြီးသင်မည်သူနောက်လိုက်သည်၊ မည်သူသည်နောက်ကိုမလိုက်ကြောင်းကိုလည်းသိပါ။ Crowdfire ၎င်းသည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံး app ဖြစ်နိုင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံချက်ကတော့ဒီ application အမျိုးအစားများကိုစိတ်စွဲလမ်းမနေဖို့ပါ။ နောက်ဆုံးမှာသူကအမြဲတမ်းသင့်ကိုအမြဲတမ်းပေးသောကိန်းဂဏန်းများကိုကြည့်ပြီးစိတ်ရူးသွားနိုင်သည်။ Intagram ကိုနှစ်သက်ပြီးစာရင်းဇယားများကိုမေ့ပါ။
ရေးသားသူ: Crowdfire Inc.
အကယ်၍ သင်သည် Instagram ရှိဓာတ်ပုံများအားလုံးကို upload တင်သောသူများထဲမှတစ်ခုအပါအ ၀ င်၊ သမိုင်းတွင်အကျော်ကြားဆုံးသောလူအချို့ကကြေငြာထားသည့်ကျော်ကြားသောကိုးကားချက်များအပါအဝင်သူတို့အား၊ ဤလျှောက်လွှာသည် InstaQuote မင်းအတွက်တော့သေချာပါတယ်
ထိုအကြောင်း Android နှင့် iOS အတွက်ရရှိနိုင်သည့်ဤ application မှကျေးဇူးတင်စကား၊ ကျော်ကြားသောကိုးကားချက်များနှင့်အလွန်လှပသောနောက်ခံများဖြင့်ပုံများဖန်တီးနိုင်လိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးပုံကိုအတော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တည်းဖြတ်ရေးရွေးစရာတွေနဲ့ဖြတ်နိုင်တယ်။
InstaQuote - ဓာတ်ပုံများပေါ်တွင်စာသား
ဒါတွေဟာ Instagram ကိုညှစ်နိုင်ဖို့အကောင်းဆုံး ၇ ခုပါ။ များစွာသောဆင်တူ application တွေရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်တခြားအရာတွေကိုလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပေးတယ်။ ငါတို့လျှောက်လွှာကိုမင်းပြပြီးပြီ ယခုသင် Instagram ကိုဖြည့်စွက်ရန်သင်အသုံးပြုသည့် application များကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြရန်အချိန်ရောက်လာပြီ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့၊ ပုံမှန်အတိုင်း၊ သင်မှတ်ချက်များအတွက်သိုလှောင်ထားသည့်နေရာကိုသုံးနိုင်သည် (သို့) ကျွန်ုပ်တို့ရှိနေသောလူမှုကွန်ယက်များမှတဆင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အပြင်ထွက်ပြီး Instagram ကိုပိုပြီးပျော်မွေ့လိုပါသလား။.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » Software များ » လျှောက်လွှာ ၇ ခုသည် Instagram တွင်အများဆုံးရရှိရန်ဖြစ်သည်